ungayikhubaza njani iknockon (cofa kabini ukuvuka) kwi-lg g4, lg v10, nezinye ii-lg smartphones
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungayikhubaza njani iKnockON (cofa kabini ukuvuka) kwi-LG G4, LG V10, nezinye ii-smartphones ze-LG
Iifowuni ze-LG kunye neeapos kudala zibonisa into ebizwa ngokuba yiKnockON function. Yiyo le nto ungayibiza ngokuba ' cofa kabini ukuvuka - xa ifowuni kunye neapos zivaliwe, cofa nje kuyo kabini, kwaye isixhobo siyavuka. Ngenye indlela, ukuba ifowuni ivuliwe, unkqonkqoza kabini kwindawo engenanto kwiscreen sasekhaya kwaye iya kulala. Yindlela entle yokulawula isixhobo sakho, ngakumbi kuba ii-smartphones ngoku zinkulu, zinzima ngakumbi, kwaye awusoloko ubabambe kakuhle, ngomnwe kwiqhosha lamandla.
Nangona kunjalo, ukuba kukho into enye abasebenzisi be-Android abayithandayo, kukuba nolawulo kuyo yonke into eyenziwa yi-smartphone yabo kwaye ayenzi. Abanye banokuthanda ukukwazi ukukhubaza i-KnockON ikakhulu ngenxa yokonga ibhetri, okanye ukunqanda ukuvuka ngengozi. Ngelishwa, umntu akanako ukufumana nje iKnockON kwiiSetingi kwaye ayicime.
Kwi-LG G3, kunokwenzeka ukukhupha inqaku ukusuka kwifowuni & apos; Imenyu yeNkonzo efihliweyo , kodwa ukhetho luyekile imenyu efanayo kwi-LG G4 kunye neV10. Ke, siyifumana njani? Ngombulelo, kukho iapp yesithathu yeqela elinokusinceda ukuphuma!
Ungayikhubaza njani itephu ukuze uvuke kwi-LG G4 kunye ne-LG V10
t iselfowuni galaxy tab s6
Eyona bhanti yokubukela yezixhobo s3
Uhlaziyo lweblu studio yamandla e-lollipop
Iapile Music & Apos; s Indawo yokuSasaza ichaze: Ivakala njani, ingaba ilungile?
Iinkqubo ezi-5 zekhamera ye-Android ezinokuthi zithathe iifoto eziluhlaza
UPandora wongeza isicwangciso sosapho esinexabiso eliphantsi esixabisa i-14.99 yeedola ngenyanga ukuya kuthi ga kumalungu osapho amathandathu
Le Folio yeSmart yekhibhodi yeApple kunye neapos (s) ezindala 12.9-intshi ye-iPad Pro iphantse yabiza kakhulu ukuba ingayinyani
Uyenza njani umfanekiso-skrini kwi-iPhone yakho
Ezona zicwangciso zihlawulelwa kwangaphambili, iVerizon vs AT&T vs T-Mobile kunye neSprint
Ulawula njani ivolumu kwiGalaxy Buds Pro ngokuthinta izijekulo
Yintoni eyenza i-iPhone inqweneleke ngokukodwa?
Uyikhusela njani ifowuni yakho ukuba igqekeziwe